शेयरबजार छिटो खोलौं
नेपाल धितोपत्र बोर्डले सोमवारदेखि पाँच कारोबार दिनका लागि शेयर बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अत्यावश्यकबाहेक अन्य सबै सेवा बन्द रहने घोषणा गर्नुभएको थियो । कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण रोक्न सरकारले मानिस मानिसबीच हुने सम्पर्क कम गर्न अन्य धेरै निर्णयहरू पनि गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै आइतवार नेप्सेले शेयर कारोबार गराउँछ कि गराउँदैन भन्नेमा बहस चलेको थियो । तर, आइतवार नेप्सेले शेयरबजार पूर्ववत् सञ्चालन गरेको थियो ।
सबैले अनलाइन सुविधा लिएका छैनन् र धेरैले कारोबार गर्न नपाउने भएकाले बन्द गरिएको हो भने पनि त्यो जायज मान्न सकिन्न । बरु अहिले शेयरबजारलाई पूर्ण अनलाइन कारोबार बनाउने उपयुक्त अवसर हो ।
अत्यावश्यक सेवाभित्र बैंक तथा बीमा पर्छन् तर शेयर बजारलाई भने अत्यावश्यक सेवाभित्र पारिएको छैन । त्यसैले शेयरबजार पनि बन्द हुनुपर्छ भन्ने केहीको तर्क छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ मा बनेको हो र यसको संशोधनमा समेत शेयरबजारलाई समावेश गरिएको छैन । वास्तवमा यसलाई समावेश नगर्नु नै गलत हो ।
आइतवार नेप्सेले शेयर कारोबार गराएपछि लगानीकर्ता संगठनहरू एकजुट भएर विरोध गरे । उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा समेत उजुरी गरे । यही विवादका कारण अर्बको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको शेयरबजार आइतवार भने १९ करोडको कारोबारमा खुम्चन पुग्यो । साथै शेयरबजार सूचक नेप्से पनि १८ अंकले घट्यो ।
सरकारले के निर्देशन दिएको छ, त्यो नेप्सेले पालना गर्‍यो कि गरेन भन्ने कुरा गौण हो । तर, शेयरबजार बन्द गरिनुपर्छ भन्ने तर्क चाहि“ उपयुक्त होइन । शेयरबजारमा लगानी गर्नेहरूमध्ये कतिपयको आम्दानीको मूल स्रोत नै यही बजार हुन सक्छ । आम्दानीका अन्य स्रोत नभएका व्यक्तिहरूले शेयर बेचेर नै घर धान्नुपर्ने हुन सक्छ । शेयरबजार तरल हुने भएकाले नै धेरैले यसमा लगानी गरेका हुन् । आवश्यक पर्दा बेचेर खर्चको जोहो गर्न सकिने र मुनाफा पनि पाइने सोचले नै धेरैले लगानी गरेका हुन्छन् । यस्तोमा शेयरबजार बन्द गरि“दा उनीहरूलाई मर्का पर्ने देखिन्छ । यही भएर नै बैंक तथा बीमालाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राखिएको हो ।
सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवा बन्द गर्नुको मुख्य कारण नै कोरोनाको संक्रमण रोक्नु हो । भीडभाडमा संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले यस्तो सामाजिक तथा शारीरिक सम्पर्क तोड्नकै लागि सरकारले विभिन्न सेवा बन्द गराएको हो । तर, शेयरबजारमा अनलाइन कारोबार हुन्छ । मानिस मानिसबीच शारीरिक भेट त्यति आवश्यक पर्दैन । हो, एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न केही कर्मचारी भने आवश्यक हुन्छन् । त्यसमा सुरक्षाको पर्याप्त सावधानी अपनाएर नेप्से सञ्चालन गर्न खासै समस्या हुने देखिँदैन । कोरोना भाइरसबाट संकटग्रस्त बनेको इटलीको शेयरबजार बन्द भएको छैन । अमेरिकामा फ्लोअर कारोबार बन्द गरे पनि अनलाइन कारोबार भने बन्द गरिएको छैन । तर, नेपालमा चाहि“ शेयर कारोबार किन बन्द गरियो ?
आइतवार कारोबार रकम घटेकोमा समेत केहीले नेप्सेको आलोचना गरेको पाइयो । अहिले सामान्य अवस्थामा जस्तो कारोबार हु“दैन । सबैले अनलाइन सुविधा लिएका छैनन् र धेरैले कारोबार गर्न नपाउने भएकाले बन्द गरिएको हो भने पनि त्यो जायज मान्न सकिन्न । बरु अहिले शेयरबजारलाई पूर्ण अनलाइन कारोबार बनाउने उपयुक्त अवसर हो । अनलाइनबाट कारोबार भइरहने हो भने धेरै जनाले यो सुविधा लिनेछन् र अनलाइन कारोबार पनि बढ्नेछ । पाँच कारोबार दिनका लागि स्थगित गरिएको शेयर बजार यथाशीघ्र खोलिनुपर्छ ।
दोस्रो चरणका प्राथमिकता[२०७६ चैत, २३]
खाद्य सुरक्षामा चिन्ता[२०७६ चैत, २२]
[Mar 23, 2020 05:13am]
This is bloody news and argument. What you think ? You aiways right paturikar. This is time for trading or be safe and make safe? Nonscence new and writer.